Tatinhtoo.com | Page 2
in: အနုပညာရှင်များ / June 16, 2019 / by: admin
ဂျူနီယာမြင့်​မြတ်​​လေးဆီ အလည်​သွားခဲ့တဲ့ တီတီ ​အေး​သောင်းရဲ့ ပုံရိပ်​​တွေ
ဂျူနီယာမြင့်​မြတ်​​လေးဆီ အလည်​သွားခဲ့တဲ့ တီတီ ​အေး​သောင်းရဲ့ ပုံရိပ်​​တွေ ကျရာဇာတ်​ရုပ်​ကို အပီပြင်​ဆုံး သရုပ်​​ဆောင်​နိုင်​တဲ့ သဘာဝမင်းသားတစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ မြင့်​မြတ်​က​တော့ ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ မိသားစု​လေးကိုလည်း ပိုင်​ဆိုင်​ထားသူတစ်​ဦးပါ။ အ​ဖေနဲ့ အရမ်းတူတဲ့ မြင့်​မြတ်​ရဲ့သား​လေးကို​တော့ အနုပညာရှင်​​တွေသာမက ပရိသတ်​​တွေက ချစ်​မဝ ဖြစ်​​နေကြတာပါ။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ မင်းသမီး​ချော​လေး မ​အေး​သောင်းက ဂျူနီယာမြင့်​မြတ်​​လေးဆီ အလည်​သွားခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်​​တွေကို လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ​ဝေမျှ​ပေးထားတာ
ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေနားက အုပ်စုဖွဲ့လုယက်မှုတွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးလား?
ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေနားက အုပ်စုဖွဲ့လုယက်မှုတွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးလား? မနေ့ည ၁၁, နာရီခန့် အမျိုးသမီး ခရီးသည် ၃,ဦးနဲ့အတူ ပုဂံကအပြန် ပုဂံအနီး သဲချောင်းတခုနားမှာ ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးနဲ့ လူ ၄, ယောက် ရှေ့ဘက် မျက်နှာချင်းဆိုင် အရပ်မှနေ ယှဉ်မောင်းလာတာမြင်လိုက်တော့ ဟွန်းတီးလိုက်တယ်။ လမ်းချ မပေးတော့ မသင်္ကာတာနဲ့ ဘေးဘက်ချမောင်းပြီးရှောင်လိုက်တဲ့အချိန် ‘ဒုန်း’ ကားကိုထိပြီ (
ဒီကနေ့ အသက် (၂၃) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကိုကျရောက်လာတဲ့ ကျော်မင်းဦး ရဲ့ မွေးနေ့အလှူ
ဒီကနေ့ အသက် (၂၃) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကိုကျရောက်လာတဲ့ ကျော်မင်းဦး ရဲ့ မွေးနေ့အလှူ ဒဏ်ရာကြောင့် ကစားသမားဘဝကနေ အနားယူလိုက်ပြီလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီက တရားဝင်ကြေငြာသွားခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ကျော်မင်းဦးဟာ မြန်မာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ ဖျောင်းဖျမှုကြောင့် သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကို ကုသပြီး ဘောလုံးပြန်လည် ကစားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါမှာတော့ ကျော်မင်းဦးဟာ ဘန်ကောက်မှာဒူးဒဏ်ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှု
နှစ် ၉၀ စကားဝါပင်ကြီးကို တရုတ်ပြည်သို့ ငွေ ၆ သိန်းနဲ့ ရောင်းစားမှု ကျောက်မဲနယ်တွင် ဖြစ်ပွား
နှစ် ၉၀ စကားဝါပင်ကြီးကို တရုတ်ပြည်သို့ ငွေ ၆ သိန်းနဲ့ ရောင်းစားမှု ကျောက်မဲနယ်တွင် ဖြစ်ပွား မြန်မာတွေရဲ့ သယံဇာတတွေကတော့ တခုပြီး တခု သူများနောက် ပါနေပါတယ် ခင်ဗျာ။ အခုတကြိမ်လည်း သက်တမ်း နှစ် ၉၀ လောက်ရှိတဲ့ စကားဝါပင်ကြီးကို ငွေ ၆ သိန်းထဲနဲ့ ခုတ်ရောင်းလိုက်ကြ ပြန်ပါပြီ။
လေလွင့်ခွေး အကိုက်ခံရပါက ခွေးချစ်သူများအဖွဲ့မှ တာဝန်ယူ ဆေးကုသပေးမည်
လေလွင့်ခွေး အကိုက်ခံရပါက ခွေးချစ်သူများအဖွဲ့မှ တာဝန်ယူ ဆေးကုသပေးမည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် လေလွင့်ခွေးအကိုက်ခံရပါက ခွေးချစ်သူများအဖွဲ့က တာဝန်ယူကာ ဆေးကုသပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အမေ့ရင်ခွင် ခွေးဂေဟာပိုင်ရှင် ဒေါ်ဝေေ၀မိုးက ဆိုသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ Orchid ဟိုတယ်တွင် ယနေ့ (ဇွန် ၁၅) င်းပသည့် လေလွင့်ခွေးများကို အဆိပ်ချ သတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် အစာကျွေးခြင်းအပေါ် ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကို ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း